Sarimiaina Manazava Ny Fanohintohinan’ilay Lalànan’ny Fifandraisandavitra Ny Fahalalahana Miteny Ao Myanmar · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Avrily 2019 5:12 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Shqip, বাংলা, Español, bahasa Indonesia, Italiano, English
Fijerena ilay sarimiaina tao amin'ny Zaikabe Momba ny Zo nomerika tao Myanmar. Sary an'ny Engage Media.
Sarimiaina fohy iray no manampy amin'ny fanabeazana ny olona momba ilay Lalànan'ny Fifandraisandavitra ao Myanmar sy ny fomba mety hahafahan'izy io manakenda ny fahalalahana miteny.
Are You Ready (Vonona ve ianareo?) dia fiarahamiasa teo amin'ny EngageMedia sy mikatroka maro mpiaro ny zo nomerika avy ao Myanmar. Ny Desambra 2018 izy io no nojerena voalohany tao Yangon, nandritra ny Myanmar Digital Rights Forum. Anisan'ireo nanampy niarakara ny fandefasana sy fijerena ilay sarimiaina ny “Myanmar ICT for Development Organization and Phandeeyar Innovation Lab.”
Nambaran'ny Engage Media fa ilay sarimiaina “dia manoritsoritra ny fiantraikany amin'ny fahalalahana maneho hevitra ao Myanmar, ary ny fomba anitsakitsahany ny zo nomerikan'ny olona.” Nampiany hoe:
Asehon'ilay sarmiaina ny fomba fanararaotan'ireo manampahefana ilay lalàna mba hisorohana sy haneriterena ireo tsy mitovy hevitra aminy.
Matetika ilay lalàna no ampiasain'ireo matanjaka mba hampanginana izay tsy mitovy hevitra aminy, ary miaraka amin'ireo tranga an-jatony mahery voarakitra, dia tena mandresy lahatra tokoa ny ho fiantraikany hihanaka amin'ny fahalalahana maneho hevitra.
Ny Artikla 66(d) amin'ilay lalàna no ifantohan'ilay sarimiaina, izay manameloka ny zavatra rehetra, miainga amin'ny “fakàna vola” ka tonga hatramin'ny “fanakorontanana” sy ny “fanaovana tsindry aloka” amin'olona hafa. Efa hatramin'ny 2013 izy io no niteraka resabe satria amin'ny ankapobeny dia ampiasain'ireo manampahefana mba handemena ireo mpanakiana sy ireo mpanao gazety. Ny fomba filaza manjavozavo ampiasainy, sy ny sazy henjana arosony dia nohararaotina mba hampanginana ny olontsotra. Ity ny lahatsoratra tsy nasiam-panovàna amin'ilay Artikla 66(d):
66. Na iza na iza manao ny iray amin'ireto hetsika lazaina manaraka ireto, noho ny faharesendahatra, dia iharan'ny fampidirana am-ponja hatramin'ny telo taona raha be indrindra na sazy ara-bola na ny izy roa mitambatra. (d) Ny fakàna vola, fanerena, misakantsakana fahatany, manao tsindry manala baraka, manakorontana, manao tsindry aloka na mandrahona olona amin'ny fampiasàna tambajotram-pifandraisandavitra.
Somary nasiana fanitsiana izy io tamin'ny 2017, saingy lazain'ireo vondrona miaro ny zon'olombelona fa tsy vitany ny miatrika ireo olana marobe momba ireo endrika mamoadoza amin'ilay lalàna. Maung Saung Kha, avy amin'ny vondron'ny tanora Athan, niaiky ny soatoavina raketin'ilay sarimiaina amin'ny fanentanan-dry zareo ho fanafoanana ny Artikla 66(d):
Tsy dia nisy fiovàna hita taratra loatra na nasiana fanitsiana aza ilay lalàna momba ny fifandraisandavitra tamin'ny 2017. Nefa misy tranga maherin'ny 70 mifandraika amin'io lalàna io. Ny “Are You Ready” dia mampiseho ny fiantraikan'ny Artikla 66(d) ary tena manampy mihitsy amin'ireo fanentanana ho fanitsiana ilay Lalànan'ny Fifandraisandavitra.
Jereo eto ilay sarimiaina: